Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Delta waxay ku dartay in ka badan 100 duullimaad oo cusub oo ka imanaya New York
Delta waxay ku daraysaa in ka badan 100 duulimaad oo cusub New York.
Kobcinta awoodda Delta Air Lines ayaa sidoo kale dib u soo celisa 40 -ka suuq ee ugu sarreeya Mareykanka garoomada diyaaradaha JFK iyo LaGuardia.
Delta Air Lines waxay ku daraysaa in ka badan 100 duulimaad maalinle ah NYC deyrtan - koror 25% awoodda marka la barbar dhigo xagaaga 2021.
Delta Air Lines waxay dib ugu soo celinaysaa adeegii aan joogsiga lahayn 40ka suuq ee ugu sarreeya magaalada New York.
JFK iyo kan ugu weyn ee LGA ee ka shaqeeya in ka badan 400 duulimaad maalinle ah oo tagaya 92 goobood.
Ka dib soo kabashada xagaaga, Delta Air Lines kama gaabinayso soo celinta duullimaadyo badan iyo meelaha loo aado ganacsiga New York iyo dadka safarka ah si isku mid ah.
Bishii Nofembar, Delta Air Lines wuxuu ku dari doonaa in ka badan 100 wadaritaan maalinle ah Madaarka John F. Kennedy iyo LaGuardia Airport marka la barbar dhigo jadwalka xagaaga ee 2021 -ka oo u turjumaysa qiyaastii 8,000 oo kursi oo dheeraad ah maalin kasta dadka iyo meelaha dadka reer New York aad u jecel yihiin.
Iyada oo macaamilka gudaha uu ku laabanayo heerarkii 2019, Delta Air Lines waxaa diiradda lagu saarayaa sidii dib loogu soo celin lahaa awoodda si ammaan ah oo la isku halleyn karo iyadoo safarka ganacsigu uu ka soo xaroodo mugga aan la arkin tan iyo markii uu cudurku dillaacay.
“Waxaan ku daraynaa 25% awood dheeraad ah dayrtaan si aan u daboolo baahida weyn ee ganacsiga iyo socdaalka caalamiga ah ee galaya sanadka soo socda,” ayuu yiri Joe Esposito, Delta SVP - Qorsheynta Shabakadda. "Waxaan sii wadnaa inaan bixinno xulasho iyo raaxo dheeri ah inta aan dib u dhiseyno isku xirnaanteena caalamiga ah oo aan gaarsiinayno waxa ugu wanaagsan ee Delta - annagoo mudnaanta siinayna macaamiisheena adeeg gaar ah, la isku halleyn karo iyo khibrad safar oo qaali ah."
Ma aha oo kaliya Delta waxay u soo celin doontaa adeeg aan joogsi lahayn dhammaan New York 40-ka suuqyada gudaha ee ugu caansan bisha soo socota, laakiin suuqyo ganacsi oo badan oo muhiim ah ayaa sidoo kale arki doona xoojin macno leh ee xulashooyinka duulimaadka, oo ay ku jiraan Boston (BOS), Washington, DC (DCA), Raleigh- Durham (RDU) iyo Charlotte (CLT). Tani waxay daba socotaa adeeggii hore ee Delta ee suuqyada shirkadaha waaweyn ee NYC horaantii dayrta, sida Chicago (ORD), Dallas/Ft. Worth (DFW) iyo Houston (IAH) - waa qayb ka mid ah habka fikirka Delta ee lagu darayo awoodda si waafaqsan soo noqoshada baahida.
Delta ayaa sidoo kale dhowaan adeeg cusub oo LGA u bilowday Toronto (YYZ) waxayna bilaabi doontaa duulimaad cusub Worcester, Massachusetts (ORH) laga bilaabo 1da Nofembar.
Delta waxay bixin doontaa duulimaadyada iyo kuraasta ugu badan ee side kasta ee JFK iyo LGA iyada oo wadarta 400 ee maalin walba taga 92 dal oo gudaha iyo dibaddaba ah. Iyo duulimaad kasta oo Delta ah JFK, LGA iyo EWR waxay hadda bixin doonaan waayo-aragnimo Heerka Koowaad, sababtuna waa in laga saaray diyaarad yar, oo 50 kursi ah dhammaan suuqyada NYC.
Delta ayaa sidoo kale ballaarisay duulimaadyadeeda Airbus A220 ee New York, iyada oo dhammaystirtay ballaarinta la mid ah xarunteena Boston ee sida xawliga ah u koreysa, ilaa Chicago (ORD), Dallas/Ft. Worth (DFW) iyo Houston (IAH). A220 wuxuu macaamiisha siiyaa waayo-aragnimo ballaaran, casriyeysan oo leh kuraasta Cabin Weyn ee ugu ballaadhan oo ka mid ah maraakiibteena, weelka sare ee awoodda sare leh iyo daaqadaha waaweyn.
Markay soo dhawaato xilligii fasaxa fasaxa oo Maraykanku diyaar u yahay qaadista xayiraadaha safarka ee booqdayaasha caalamiga ah ee la tallaalay, Delta waxay ku dari doontaa adeegyo badan oo New York ah faylalka faylalka adduunka dhammaadka 2021.
Badweynta Atlaantikada dhexdeeda, Delta waxay ka hawlgeli doontaa ilaa 15 duulimaad oo maalinle ah oo tagaya 13 goobood bisha Diseembar.
Delta waxay laba jibaari doontaa duulimaadyada Paris (CDG) iyo London (LHR) ilaa laba jeer maalintii iyo sidoo kale kordhinta adeegga maalinlaha ah ee Dublin (DUB) laga bilaabo December 6.
Fasaxyada jiilaalka, Delta waxay bilaabi doontaa duulimaad maalinle ah oo Tel Aviv (TLV) ah oo bilaaban doona December 18 waxayna dib ugu soo celin doontaa duulimaadyo toos ah Lagos (LOS) saddex jeer toddobaadkii December 7.
Intaa waxaa sii dheer, Delta waxay dib ugu soo celin doontaa adeegga aan joogsiga lahayn Frankfurt (FRA) 13 -ka Diseembar, oo markii ugu dambeysay la hawlgeliyay Maarso 2020.
Laatiin Ameerika iyo Kariibiyaanka, Delta waxay ka hawlgeli doontaa in ka badan 20 duulimaad oo maalinle ah oo tagaya 18 goobood, taasoo dib u soo celinaysa awoodda ilaa 85% heerarkii hore ee masiibada.
Kuwa raadinaya in si diiran looga baxo, Delta waxay dib u bilaabi doontaa adeegga São Paulo (GRU) iyo Los Cabos (SJD) 19 -ka Diseembar, oo lagu daray kordhinta adeegga maalinlaha ah ee St. Thomas (STT) iyo St. Martin (SXM) December 18 .
Delta ayaa sidoo kale bilaabi doonta adeeg cusub JFK ilaa Panama City, Panama (PTY), 20ka Diseembar.